Milateriga Soomaaliya oo ka dhaqaaqay Jalalaqsi kuna sii jeeda Buulobarde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada milateriga Soomaaliyeed ayaa saaka ka dhaqaaqay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, iyagoo u jiheystay dhanka degmada kale ee gobolkaas ka tirsanee Buulobarde, halkaasoo Alshabaab go’doon sareen, lana gaariin waayey raashinka.
Ciidamada dowladda ayaa sheegay in maanta ka wareegeen tuulooyin farabadan oo Alshabaab maamulayeen, islamarkaana hoos yimaadda degmada Jalalaqsi.
Deegaanada ciidamadu sheegeen iney la wareegeen waxaa ka mid ah Deegaanada Xero Lugoole, oo 27 KM u jirta deegaanka Fiidow, Jar, Raaxaale, Janbiley, Buurweyn, Miirgab, iyo Afcad, kuwaasi oo hoos yimaada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Howlgalka oo saakay waaberigii bilowday ayaa waxaa la filayaa in Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku gaaraan degmada Buulo Barde, si halkaas loo gaarsiiyo raashin kaalmo ah oo muddo ku xayirnaa degmada Jalalaqsi.
Lama soo sheegin ilaa hadda wax dagaal ah oo qabsaday ciidamada galbinaya raashinka qargaarka ah ee kusii jeeda Buulo Barde.
Taliyaha Qeybta 12-ka April Jen, Maxamuud Maxamed Qaafow ayaa xalay sheegay in qorshahooda yahay sidii ay raashin xoog ku gaarsiin lahaayeen degmada Buulo Burde, iyadoo inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulo Burde ay ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Gaas: Sarkaal Alshabaab baxsad ah ayaan ku qabanay Garowe